Version 0.3.6 – Chọọ m ma ọ bụrụ na ị nwere ike
December 2, 2009 site na rịọ Ahapụ a Comment
Nke a na-agbakwụnye version a dị nnọọ mma mma, nke anyị na-atụ ọnọdụ ya ọbụna mma mgbe tụnyere ọzọ ngwọta. Nke a bụ ikike ịrụ a search na sụgharịrị asụsụ na sụgharịrị peeji nke. Ya mere ugbu a gị sụgharịrị ọdịnaya na-aghọ nnọọ ihe dị ka ọrụ gị.
Anyị na-ịrịba ama mma RSS azụ support a version, ma ugbu a, njikọ ke RSS kwesịrị ejikọta na ziri ezi asụsụ. Ga-amasị anyị na-ekele datapharmer maka enyemaka ya na nke a. Anyị ga-amasị rịba, n'ihi na ndị niile ọrụ arịọ google sitemaps mwekota, na RSS faili ntanetịime bụ ihe dị mma isi n'ihi na sitemaps na google ebe, otú i nwere ike tinye ọhụrụ gị rss-azụ ma na ikwu na-azụ ma google nwere mma visibiliti.
Ikpeazụ obere fix, ugbu a anyị na-ịsụgharị n'okpuru ụdị buttons (mma maka search ụdị).
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a version – ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-agbajikwa, dị nnọọ ikwu okwu ebe a, ma biko – na-eji a mail anyị nwere ike zaghachi, Ma anyị na-na-enweghị ike na-azụ gị, nke bụ ihe ihere…
Mata echiche, chinchi, otuto mgbe niile na-nabatara.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: obere, tọhapụ, search, WordPress ngwa mgbakwunye